KongoLisolo "KL" Soo koobis guud ahaan waa bog loo sameeyay ujeedka isu imaatinka wiilasha iyo gabdhaha asal ahaan ka soo jeeda Afrika. KongoLisolo wuxuu u furan yahay dad ka kala socdaa dhammaan dhinacyada nolosha, wuxuuna u ogolaanayaa wadaagida ra'yiga, isweydaarsiga fikradaha si loo barto is-barbardhigga ku salaysan waaya-aragnimada dadka kale.
Waa maxay sababta magaca KONGOLISOLO ?
KONGO: singifie "Jacayl" - sidoo kale kali kali "Lafdhabarta aadanaha" & "Dadka tababarta shabeellada"
lisolo : hab "Wada sheekeysi". Markaa aynu wada hadalno dadka madow / Afrikaanka!
KongoLisolo ku dhiirigeliso "JADWALKA SHARCIYADA" Haddii aad hayso su'aalo, soo jeedin inaad rabto inaad nala wadaagto, waxaad u diri kartaa: la xiriir @kongolisolo.co
Nov29 08: 46